मधेश मुद्दाको उचाई र नेतृत्वको विकास
नेपालभित्र मधेश समस्या दिनानुदिन जटिल पार्ने कार्य गरिँदैछ । सहज रूपमा समाधान हुन सक्ने समस्यालाई पनि दमन, बेवास्ता, दिग्भ्रमित र तत्क्षण चातुर्यता गरेर समस्या थाँति राखि राजनीति गर्ने कार्यले मधेश अफगानको बाटो समात्दैछ । भाषणमा मात्र मधेश प्रेम देखाउने नेतृत्वको होडबाजीका कारण आज मधेशी जनसमुदाय विकल्पको खोजी गर्दैछ ।
मधेशका इमान्दार कार्यकर्ता र ग्रामीण नेताहरूलाई सत्य र तथ्यभन्दा फरक राखेर भावनात्मक दुरूपयोग गर्न खप्पीश नेतृत्वले मधेशलाई अन्याय गर्दै सिंहदरबार छिर्ने दाउमा नरहेको भन्न सकिन्न ।
नारा र भाषणमा मात्रै मधेशप्रेम देखाउने नेताहरूले मधेशको जनजीवन र सत्तामा पहुँचको तहमा सुधार हुन सकेन भने अबको मधेश राजनीति विग्रहको मार्ग समात्नेछ । पटक–पटकको आश्वासन र राजनीतिक दुरूपयोगबाट प्रताडित भएका मधेशी समुदायलाई विश्वासमा लिन सजिलो छैन । मधेशलाई विश्वासमा नलिइकन नेपाल साझा, शान्त र विकसित हुन सक्दैन । सत्ता र सिंहदरबारलाई मात्र राजनीति ठान्नु ठिक होइन । मधेशकेन्द्रित दलहरू बीचको एकीकरणले शुभ संकेत पक्कै दिएको छ । तर, पूर्व कार्यको समीक्षा, विधागत प्रष्टता, समयसीमा, नयाँ योजना र आममाफीसहितको एकीकणले ठूलो उचाई प्राप्त गर्नसक्छ । वि.सं. २०६४ साल पछिको सत्तायात्रामा एकीकृत दलहरूले नेपालको न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता र समाजमा के–कस्ता योगदान दिए वा किन दिन सकेन भन्ने कुराको प्रष्टोक्ति नहुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमाथि गम्भीर पश्न उठेको छ । नेताहरू एकीकृत हुनु सुखद् पक्ष हो तर उक्त एकीकरणले पूर्वकार्यलाई कसरी समीक्षा गर्छ वा नवीन योजनालाई कसरी विश्वास गर्ने ?
पूर्वकार्यको समीक्षा, नवीन योजना र विश्वस्त प्रतिबद्धताको कमी देखिनु हुन्न । मधेशका जनताहरू मुद्दा, समुदाय, अधिकार र न्यायप्रति थप सचेत हुँदै गएका छन् । मधेश मुद्दाको उचाई विश्वस्तरमै बढेको छ । मुद्दाको उचाई सँगसँगै नेतृत्वको विकास र नेतृत्वमाथि विश्वासको आधारहरू नवनिर्माण गर्न सकिएन भने मधेश विग्रहको बाटो अख्तियार गर्न सक्छ ।